Thwebula Java 8.231 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Java
Java – a platform isofthiwe ukudlala okuqukethwe eyayibhalwe ngo-Java ulimi lokwakha izinhlelo. Isofthiwe isetshenziswa ukunwetshwa interactive, izici multimedia web-iziphequluli nangenxa ukubonisa okuyiwonawona amasayithi. Java siqukethe amathuluzi adingekayo ukuze adale futhi uqalise isofthiwe noma amasevisi ezihlukahlukene ezihloselwe on phansi Java-ubuchwepheshe. Futhi isofthiwe has a amathuluzi anhlobonhlobo for filtration input bese okukhipha.
Ukunwetshwa izici ze kanye multimedia ye web-iziphequluli
Ukuthuthukiswa software esekelwe-Java ubuchwepheshe
Ukwethulwa kwe-software by the Umhlanganisi
Amazwana ku Java
Java software ehlobene
The instrument ukuvula amafayela ukuthi ikhiyiwe ngu izinqubo uhlelo. It isekela ukuqedwa uhlelo amaphutha ehlukahlukene ngesikhathi emsebenzini amafayela.
I-Fotosizer – isofthiwe yokucindezelwa kwe-batch nokuguqulwa kwamafayili wezithombe. Isoftware ivumela ukuguqula ikhwalithi yesithombe, usayizi nezinye izinketho ngesikhathi sokuguqulwa kwamafayela.